Daawo Sawirada Magaalada Kiev oo qaati kataagan Taageerayaasha Waalan ee kooxda Liverpool | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Daawo Sawirada Magaalada Kiev oo qaati kataagan Taageerayaasha Waalan ee kooxda Liverpool
(26-5-2018) Magalaada Kiev oo Caawa Marti gelineysa Cayaarta kama damabaysta ah ee koobka Horyaalada yurub ayaa beryahaan waxaa mashaquuliyey Taageerayaasha aan caadiga ahayn ee kooxda Liverpool kuwaas oo rabshado iyo qarbudaad ku haya.
Duqa magaalada Kiev ayaa Cabasho ka muujiyey Boqolaal Taageerayaal kooxda Liverpool ah oo iyaga oo khamri cabsan laga mari la.yahay Wadooyinka Magaalada iyada ay dheceen isku dhacyo Taageerayaal Real Madrid iyo Liverpool waxaana jira mashaquul fara badan oo ay ku soo kordhiyeen Caasimada.
Wargeyska Daily Mail ayaa soo Wariyey in koox yar oo ka tirsan Taageerayaasha Liverpool ay dagaal lagaleen kuwo kale oo isugu jira dalka Marti gelinaya Finalka Champions League iyo kooxda Real Madrid Maalinkii Khamiistii gelinkeeda danbe ayuuna dhacay dagaalka labada dhinac sida lasheegay.
Taageerayaasha Liverpool ayaa lasheegay in ay isku dheceen Taageerayaal kale meel ku dhow Garoonka Olympic Stadium,halkaa oo ay ku taalo Maqaaxi laga cunteeyo Waxaana afhayeen u hadalay booliska Magaalada Kiev uu sheegay in ilaa hada ay hayaan dhaawaca 7 ruux oo 3 ka mid ah ay yihiin Taageerayaasha Liverpool isla Markaana ay xakameeyeen isku dhicii halkaa ka dhashay.
Kumanaan Taageerayaal ah oo ka kala socda kooxaha Liverpool iyo Real Madrid ayaa gaaray Magaalada Caasimada ah ee Kiev halkaa Maalinka Sabtiga ah lagu dheeli doono Cayaarta kama damabaysta ah ee koobka Champions League amaanka ayaana aad loo adkeeyey maadaama laga cabsi qabo in iska hor imaadyo ay halkaa ka dhacaan.